अनलाईनबाट प्यान नं कसरी लिने ? – GoodNews24
Home/अन्य/अनलाईनबाट प्यान नं कसरी लिने ?
अनलाईनबाट प्यान नं कसरी लिने ?
सरकारले अवकाे आर्थिक बर्ष देखी सरकारी या निजि जुनसुकै कम्पनिमा काम गर्ने कर्मचारीकाे प्यान दर्ता आवश्यक हुनुपर्ने नियम बनाएकाे छ । (PAN )प्यान वास्तवमा जसले पनि लिन मिल्छ। यसका लागी कुनै क्वालीफिकेसन चाईदैन, बस तपाईले राज्यलाई कर तिरेकाे छ भन्न दिईएकाे अंक हाे ।
यसका लागी कुनै झनझट नै छैन ।
⇒सर्ब प्रथम ird.gov.np मा गएर Tax Payer Portal मा जानुस्
⇒ त्यसमा Registration (PAN,VAT,EXCISE) मा गएर Application for Registration मा जानुस्
⇒ त्यसमा रहेकाे Username, Password, Number, Email ID राखेर, PAN मा टिक लगाएर IRO/LTO भित्र IRO Name मा आफुलाई जुन ठाउं सजिलाे लाग्छ त्यही ठाउं छान्नुस र समिट गर्नुस् । आफ्नै जिल्लाबाट लिएकाे राम्राे हाे तर अरु ठाउंबाट पनि मिल्छ।
⇒ यसपछि तपाईलाई submission number दिईनेछ। त्यसलाई कपि गरेर वा टिपाेट गरेर राख्नुस्। अब Registration login मा गएर साेही समिसन नं अनि username ..password राखी login गर्नुस र त्यहां भने बमाेजीम सबैकुरा राखेर समिट गर्नुस् ।
⇒ सबैकुरा मिले पछि समिट गर्नुस् र तपाईकाे सबै विवरण एउटा फर्म बनेर
आउनेछ। त्यसलाई print थिचेर PDF मा save गर्नुस्।
⇒साे फर्म प्रिन्ट गरेर तपाईले छानेकाे राजस्व कार्यलय जानुस् ।
⇒ राजश्व कार्यालयले तपाईंलाई विवरण जाँच गरेर Pan कार्ड दिनेछ । यो सबै प्रक्रिया निशुल्क हो । प्यान कार्ड लिन कुनै शुल्क तिर्नु पर्दैन ।